WTE ANJARA APPLICATION APPLICATION - World Trade Exchange
WTE TRANO FAMPIHARANA FANAMPIANA
Forme momba ny asa
Azafady fenoy vaovao ity takelaka ity satria hamarininay ny fampahalalana nomena
NY mpangataka iray dia mety takiana amin'ny mpiambina ankehitriny sy ny porofon'ny ADDRESS talohan'ny nanambarana azy.
MBA FENO IREO LOHATENY ETO ambany
Title Mr.	Rtoa.	Miss
Hafiriana no nipetrahanao tamin'ny adiresinao ankehitriny?
Ny nomeraon-telefaona WhatsApp anao
Rohy mombamomba anao Facebook
Ny rohy mombamomba anao LinkedIn
URL-n'ny URL anao manokana na URL pejy portfolio
Lazao ny taonanao
Lazao ny daty nahaterahanao
Inona ny zom-pirenenao?
Avy aiza ny firenena niavianao?
Miteny anglisy ve ianao? ENY SA TSIA?
Fahaizana miteny anglisy
Ilaina ny karama
Andro / ora azo iasana
Tsy misy Pref
Adiny firy ianao no afaka miasa isan-kerinandro?
Afaka miasa mandritra ny 7 andro isan-kerinandro ve ianao raha ilaina izany?
Afaka miasa mandritra ny 8 ora isan'andro sy 6 andro isan-kerinandro ve ianao?
Asa no ilaina
Amin'ny fotoana feno ihany
Fotoana manontolo na tapa-potoana
Rahoviana ianao no ho afaka hanomboka asa, raha manolotra asa anao izahay anio?
Vonona hifindra toerana ho an'ity asa ity ve ianao?
Vonona hifindra toerana ao amin'ny fireneko aho.
Vonona hifindra any amin'ny firenena hafa aho.
Tsy vonona ny hifindra toerana aho.
Tsy azoko antoka ny hamindra toerana.
Inona no tadiavinao amin'ity asa ity?
Fampianarana sy fampahalalana hafa
Ho an'ny mari-pahaizana akademika sy andrim-panjakana voatanisa etsy ambany
ampidiro am-pitiavana ireo kopian'ny mari-pankasitrahana isaky ny andrimpanjakana rehefa mandefa ity takelaka ity
LOCATION (Adiresy mailaka feno)
Karazana sekoly ambaratonga faharoa
Toerana ambaratonga faharoa
Data momba ny fanombohana amin'ny lisea
University Data Start
Bisy. Na Sekolin'ny varotra
Bisy. Na Karazan-tsekoly varotra
Bisy. Na anaran'ny sekoly fivarotana
Bisy. Na ny toeran'ny Sekolin'ny varotra
Bisy. Na Daty fanombohana Sekolim-barotra
Anaran'ny sekoly matihanina
Toerana misy ny sekoly matihanina
Daty fanombohana sekoly
Efa voaheloka ho nanao heloka ve ianao?
Raha eny, hazavao ny isan'ny faharesen-dahatra, ny toetoetran'ny fandikan-dalàna mitarika ho amin'ny faharesen-dahatra, ny fomba nahavita / nanao, ny sazy napetraka ary ny karazana fanarenana.
Azafady mba tanisao roa ny referansy olona mahalala tsara anao sy matoky anao tsara, hahafahana manamarina ny toetranao ary mety hiasa ho mpiantoka anao raha takianay, ankoatry ny havana na ny mpampiasa teo aloha.
Tsy maintsy ambaranao ny fifandraisanao amin'ireo andinin-tsoratra masina na ny fomba nahalalanao azy ireo.
Ireo olona tanisainao ho toy ny fanovozan-kevitra dia tokony ho tompona orinasa na olona tompon'andraikitra izay miasa am-pahibemaso amin'ny fikambanana malaza ary afaka mifandray rehefa ilaina izany.
Anarana (Reference 1)
Anarana (Reference 2)
Toerana (Reference 1)
Toerana (Reference 2)
Orinasa (Reference 1)
Orinasa (Reference 2)
Adiresy (Reference 1)
Adiresy (Reference 2)
Telefaona (Reference 1)
Telefaona (Reference 2)
Adiresy mailaka (Reference 1)
Adiresy mailaka (Reference 2)
Tranokalan'ny orinasa (Reference 1)
Tranokalan'ny orinasa (Reference 2)
Azafady mba tanisao ny zavatra niainanao nandritra ny dimy taona lasa, manomboka amin'ny asanao farany indrindra. Raha niasa tena ianao dia omeo ny anaran'ny orinasanao. Mametaka takelaka fanampiny raha ilaina.
Anaran'ny mpampiasa (Job 1)
Anaran'ny mpanara-maso farany (Job 1)
Anaran'ny mpanara-maso farany
Avy amin'ny (Joba 1)
To (Joba 1)
Fanombohana (Joba 1)
Famaranana (Joba 1)
Adiresy feno (Joba 1)
Laharana telefaona (Job 1)
Laharan-telefaonan'ny mpampiasa anao
Ny lohateninao farany (Job 1)
Ny lohateninao farany
Antony fialana (manokana)
Antony fialana (Joba 1)
Tanisao ny asa notazominao, ny adidy notanterahinao, ny fahaizana nampiasaina na nianaranao, ny fandrosoana na ny fampiroboroboana nandritra ny niasanao teto amin'ity orinasa ity.
Adidy amin'ny asa (Job 1)
Anaran'ny mpampiasa (Job 2)
Anaran'ny mpanara-maso farany (Job 2)
Avy amin'ny (Joba 2)
To (Joba 2)
Fanombohana (Joba 2)
Famaranana (Joba 2)
Adiresy feno (Joba 2)
Laharana telefaona (Job 2)
Ny lohateninao farany (Job 2)
Antony fialana (Joba 2)
Adidy amin'ny asa (Job 2)
Anaran'ny mpampiasa (Job 3)
Anaran'ny mpanara-maso farany (Job 3)
Avy amin'ny (Joba 3)
To (Joba 3)
Fanombohana (Joba 3)
Famaranana (Joba 3)
Adiresy feno (Joba 3)
Laharana telefaona (Job 3)
Ny lohateninao farany (Job 3)
Antony fialana (Joba 3)
Adidy amin'ny asa (Job 3)
Afaka mifandray amin'ny mpampiasa anao taloha ve izahay?
Nahavita ity fampiharana ity ve ny tenanao?
Raha tsy izany, iza no nanao (Joba 3)
Raha tsy izany, iza no nanao
Anaran'ny mpampiasa (Job 4)
Anaran'ny mpanara-maso farany (Job 4)
Avy amin'ny (Joba 4)
To (Joba 4)
Fanombohana (Joba 4)
Famaranana (Joba 4)
Adiresy feno (Joba 4)
Laharana telefaona (Job 4)
Ny lohateninao farany (Job 4)
Antony fialana (Joba 4)
Adidy amin'ny asa (Job 4)
Raha tsy izany, iza no nanao (Joba 4)
SORATY NY ANDRAIKITRA REHETRA ARY NY FITSARANA ANAO
Ny fahaiza-manao rehetra
Omeo anay farafahakeliny ANTONY 10 LEHIBE INDRAY IZAO NO MITSIPIKA fa ianao no tsara indrindra KANDIDA amin'ity asa ity raha ampitahaina amin'ny olona rehetra mangataka ho an'ny toerana mitovy.
10 Antony lehibe
VALIO NY FANONTANIANA REHETRA ETO ambany sy marina
1. Manana fanamby ara-pahasalamana ve ianao amin'izao fotoana izao na olana ara-pahasalamana indraindray mety hisy fiatraikany amin'ny asan'ny asa? ENY SA TSIA?
2. Raha eny amin'ilay fanontaniana etsy ambony dia hazavao ny natioran'ny fanamby ara-pahasalamana (tanisao izay aretina lehibe, fandidiana, lozam-pifamoivoizana sns mety ho azonao)
3. Vonona ny hanao fitsapana mialoha momba ny zava-mahadomelina ve ianao?
4. Bevohoka ve ianao izao? ENY SA TSIA?
5. Raha eny amin'ny fanontaniana 4 dia lazao hoe firy volana
6. Manambady ve ianao? ENY SA TSIA?
7. Raha ENY manontany ny 6, firy taona ianao no nanambady?
8. Raha TSIA amin'ny fanontaniana 6, efa nanambady ve ianao taloha? ENY SA TSIA?
9. Raha ENY ny manontany ny 8, firy taona ianao no nanambady taloha?
10. Manan-janaka ve ianao?
11. Raha ENY ny manontany 10, firy ny zanakao?
12. Moa ve ianao mety hanana fifandraisana mety amin'ny fanambadiana?
13. Raha ENY ny manontany ny 12, ahoana no nifandraisanao tamin'ilay fifandraisana?
14. Rahoviana ianao no hanambady?
15. Miaina irery ve ianao? ENY SA TSIA?
16. Raha tsia ny fanontaniana 15, lazao ny fifandraisanao amin'ireo mpanome trano anao amin'izay itoeranao?
17. Azo antoka sy milamina ve ny trano itoeranao mandritra ny 12 volana manaraka? ENY SA TSIA?
18. Mila fanampiana ara-bola amin'ny trano hafa alohan'ny 12 volana ho avy ve ianao?
19. Manana olana ara-pahasalamana tsy manam-paharoa ve ianao izay tsy mamela anao hanao karazana asa sasany na tsy mamela anao ho ao anaty toe-javatra asa sasany nefa tsy misy vokany ratsy eo aminao? ENY SA TSIA?
20. Raha ENY ny manontany ny 19 dia hazavao ary lazao ny karazana asa na ny toe-javatra iasana izay mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamanao.
21. Lazao anay kely momba anao:
22. Toe-javatra iainana
Miaina irery aho.
Mipetraka miaraka amin'ny namako aho.
Miaina miaraka amin'ny olona iray ao amin'ny fianakaviana aho.
Mipetraka miaraka amin'ny zanako aho.
Mipetraka miaraka amin'ny vady aman-janako aho.
Miaina miaraka amin'ny namako aho.
MBA VAKIO TSARA
FAHAFAHANAZANA HANAOVANA BACKGROUND ATAO
Ho takalon'ny fandinihana ny fangatahako asa ataon'i World Trade Exchange Pte Ltd (antsoina hoe "Orinasa fifanakalozam-barotra"). Manaiky aho fa:
Ny fanekena ity fampiharana ity dia tsy miteraka fifanarahana asa tena izy na tsy tiana hambara.
Omeko alàlana ny famotopotorana ireo fanambarana rehetra ao amin'ity rindranasa ity.
Fantatro fa ny fanolorana diso na fanesorana ny zava-misy nantsoina dia antony fandroahana amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana teo aloha. Manome aho izao World Trade Exchange Fahazoan-dàlana an'ny orinasa hifandray amin'ny sekoly, ny mpampiasa teo aloha (raha tsy voalaza manokana), ny referansa ary ny hafa ary amin'ny famoahana izany World Trade Exchange Orinasa amin'ny andraikitra rehetra noho ny fifandraisana toy izany.
(Apetaho amin'ny kopian'ny 'Signature of Applicant' etsy ambany ny kopian'ny scananao notarafina.
Mametaka kopia namboarina tamin'ny kara-panondrom-pirenenao, pasipaoro na fahazoan-dàlan'ny mpamily izay anananao sonia mitovy amin'ilay napetraka etsy ambany. Tsy tokony hamboarina amin'ny fomba rehetra io).
Mametraha rakitra eto na kitiho raha hampakatra
Haben'ny upload: Maximum 516MB
Pasipaoro na fahazoan-dàlana hamily